संविधान संशोधनको पक्षमा बहुमत नदेखेपछि संंसद बैठक स्थगित – ebaglung.com
संविधान संशोधनको पक्षमा बहुमत नदेखेपछि संंसद बैठक स्थगित
२०७४ बैशाख १७, आईतवार १४:२०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
सत्तारुढ राप्रपाका केहि सांसदहरु संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा देखिए !
काठमाडौं, २०७४ बैशाख १७ । आजको संसद बैठक पूर्वसांसद नथुनीसिंह दनुवारको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित गरिएको छ । सरकारले संविधान संशोधनका पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नदेखेपछि संसदको बैठक संविधान संशोधनको कार्यसूचिमै प्रवेश नगरिकन वैशाख २१ गते बस्नेगरी स्थगित भएको हो ।
मधेसी मोर्चासँग गरिएको सहमति अनुसार १७ गते संशोधन दर्ता गर्ने र १८ गते फास्टट्रयाकबाट पारित गर्ने योजना भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचन अघि संविधान संशोधनको संभावना टरेको छ ।
यसैवीच सत्तारुढ राप्रपाका केहि सांसदहरु संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका छन् । आईतबार बोलाईएको राप्रपाको संसदीय दलको बैठकमा १० जना सांसद अनुपस्रि रहेकाले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने देखिएको श्रोतले भन्यो ।
आजको संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदहरुमा तत्कालीन राप्रपा नेपालबाट निष्काशित नेता केशरबहादुर विष्टका छोरा विराज विष्ट, स्व पदमसुन्दर लावतीकी बुहारी बबिता लावती लगायत रामकुमार सुब्बा, रेशम लामा, रमेशकुमार तामाङ, सीता लुइँटेल, गीता सिंह, लक्ष्मी थापा पासवान, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ रहेको बताईएको छ ।
उनिहरु संसद बैठक सुरुहुनु अगावै संपर्कहीन भएका हुन ।
बागलुङमा माओवादी केन्द्र, एमाले र राजमो वीच चुनावी तालमेल : यस्तो छ पदीय भागबण्डा !
बैंकमा जम्मा गर्न पठाएको रकम लिएर भाग्ने पक्राउ